နွရာသီရဲ့  အပူဒါဏ်ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် Knauf Heatshield မှာယူလို့ရပါပြီ။ ဂျာမန်နည်းပညာနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကနေ ထုတ်လုပ်ထားပြီး Lightweight Technology ဖြစ်ပါတယ်။ Interior Wall နဲ့ Ceiling Area မှာ အသုံးပြုရမှာပါ။ Aluminium foil ပါတာမို့ အပူဖြာထွက်မှုကို ၉၅% ထိ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ချောမွေ့တဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့ လှပတဲ့ ဒီဇိုင်းဖြစ်တဲ့အပြင် Installation လုပ်ရတာလည်း လွယ်ကူမြန်ဆန်စေပါတာမို့ အချိန်ကုန်မှာ ပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။ hazardous substance တွေမပါဝင်တာကြောင့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ အန္တရာယ်ဖြစ်မျာကိုလည်း စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ Environmental friendly လည်းဖြစ်ပါတယ်။
The new FC-336 takes the already powerful FC-236 device and improves it inanumber of key areas. A compact and lightweight unit, the FC-336 still comes as standard witha3.5” TFT colour screen, full numeric keypad, super long battery life, integrated cellular modem, digital camera, internal L1 GPS receiver, compass and powerful Windows Mobile 6.1 operating system, but even these standard features have been updated. The most obvious feature of the new model is the 600 nits ‘QuadraClear’ sunlight readable display, which dramatically improves the performance of the screen when working in direct sunlight. In addition, the FC-336 features an extended keyboard layout, 5MP camera, SiRFstar IV L1 GPS with 48 channels capable of 2m DGPS positioning and now Windows Mobile 6.5 operating system. In terms of capacity, it comes as standard with 4GB of flash memory and 256MB RAM, and now providesaMicroSDHC slot capable of utilising 32GB Micro SD cards. Interfacing with your existing hardware will not beaproblem, given the number of options that are available. Select from Class 2.1 Bluetooth, WiFi 802.11b/g, USB OTG (On The Go) Client and Host 2.0, or even the RS232 Serial port. Processing speed has been increased from 806MHz toa1GHz processor, enabling the FC-336A to process all of your field tasks with ease and efficiency. In addition to processing your field tasks with MAGNET Field, eGIS, or Pocket3D, the controller can run many third party productivity applications, so whether you need to keepatrack of site assets with an Office Mobile Excel 2010 spreadsheet or send an email back to base, the FC-336 makes it all possible.
Liminated Skirting သည် Shera Group ၏ Fiber Coment Technology နည်းပညာနှင့် Lamination နည်းပညာနှစ်ခုအား ပေါင်းစပ၍ ဖန်တီးထားသော အလှဆင်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ သစ်ထုတ်စဉ် Skirting ကဲ့သို့ပြည့်ဝသော လှပမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်သည့်အပြင် သစ်ပင်၏အရောင်အသွေးကဲ့သို့ အရောင်စုံများကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤ Liminated Skirting အားသစ်အချောထည် Skirting များနှင့်အခြားသော Skirting အမျိုးအစားများနေရာတွင် အစားထိုးသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ဤ Liminated Skirting သည် Floor &amp; Wall တွင် skirting အဖြစ်လည်းကောင်း wall &amp; Ceiling တွင် Cornice (ကောနစ်) သတ္ထုနန်းပြားအလွှာပါး ဖုံးအုပ်ထားသော အနားကွတ်အဖြစ်လည်းကောင်း လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အသုံးပြုရ လွယ်ကူစေရန် ခေတ်မှီနည်းပညာများကို အသုံးပြုပြီး ကောင်းသည်ထက်ကောင်းအောင် ပိုမိုအဆင့်မြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ရေဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းပြီး အပူဒဏ်ခံနိုင်အောင် အထူးပြုလုပ်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသည်။နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ စက်ကိရိယာများနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ဘိလပ်မြေများကို ၁၀၀%ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။အပူဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်တက်သော ပျက်စီးမှု နှင့် ရာသီဥတု ဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်တက်သော ပျက်စီးမှုများကို ကာကွယ်တားဆီးပေးပြီး တစ်ခါ အသုံးပြုခြင်းဖြင့် နှစ်ရှည်အသုံးခံ မှုကြောင့် အသုံးပြုသင့်သော ဘိလပ်မြေတစ်မျိူးဖြစ်သည်။ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတိုင်း သင့်တော်သော အမျိူးအစားဖြစ်ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်း နှင့် အရပ်ဘက် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတိုင်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဘိလပ်မြေအမျိူးအစား ဖြစ်သည်။
Porland Type 42.5 Cement
အရည်အသွေး ပြည့်မှီသော ဘိလပ်မြေတစ်မျိူးဖြစ်ပြီး ရေပါဝင်မှုကြောင့် အပူဒဏ်ခုခံနိုင် ပြီး အသုံးပြုရ ချောမောပြေပြစ်စေသည်။ရိုးရိုး အဆောက်အအုံ များ၊ မြေအောက် အဆောက်အအုံများ နှင့် ရေအောက် ကွန်ကရစ်များ ဆောက်လုပ်ရာတွင် လည်းကောင်း အထပ်မြင့် ဆောက်လုပ်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ အမျိူးမျိူးသော ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်သော ဘိလပ်မြေ အမျိူးအစား တစ်ခု ဖြစ်ပြီး အပူဒဏ် နှင့် အအေးဒဏ် ခံနိုင်အောင် အထူးပြုလုပ်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အသုံးပြုရ စိတ်တိုင်းကျ မှု အပြည့်အဝပေးနိုင်ပါသည်။
လေးထောင့်ပုံဏ္ဍန်ရှိသောလှပသောအုတ်ကြွတ်မိုး (Square Tiles)
EVA ကုမ္ပဏီမှ တင်သွင်းသောအရည်သွေးကောင်းမွန်သည့် လှပပီးဒီဇိုင်းဆန်သည့်အဆော က်အအုံသုံးနှင့်စက်ရုံသုံးပစ္စည်းဖြစ်သည့် အုတ်ကြွပ်အမိုး ( Square Tile)ကို လူကြီးမင်းတို့အတွက်တင်သွင်းဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်၊ဟိုတည်၊စက်ရုံအ လုပ်ရုံများတွင်သာမက အခြားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါ့ပြင်၎င်းအုတ်ကြွပ်မိုး၏ပုံစံသည် လေးထောင့်ကွက်ပုံစံရှိပြီး ဒီဇိုင်းလှပသေသပ်သည့်အပြင် လူကြီးမင်းတို့ ၏အိမ်ခေါင်းမိုးမှာလည်း ရေစီးစင်းရာတွင်လည်းလျင်မြန်သည့်အပြင် ခိုင်ခံ့ပြီး ကြာရှည်ခံသည့် အုတ်ကြွတ်မိုးဖြစ်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် လေးထောင့်ပုံ စံရှိအုတ်ကြွတ်မိုး ( Square Tile)ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလိုပါက EVA(Pre-painted Alu-zin Roffing Sheet) ကုမ္ပဏီကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
Portland Type Jumbo Bags Cement
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အထူးသင့်တော်အောင် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသော အသေးစားရောစပ်မှုဖြင့် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသော ဘိလပ်မြေတစ်မျိူး ဖြစ်သည်။သာမန်အိတ်ထက် ပိုမို ကြီးမားစွာ ထုတ်ပိုးထားပြီး 50 ကီလိုဂရမ် အထုတ်ထက် Packing Charge ကို လျော့ချပေးနိုင်သည်။အသုံးပြုပြီးသော အိတ်ကိုလည်း တစ်ခါပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်သည်။အရည်အသွေးပြည့်မီသော ဘိလပ်မြေတစ်မျိူး ဖြစ်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတိုင်ဒး အသုံးဝင်သော ဘိလပ်မြေတစ်မျိူးဖြစ်သည်။
Royal Material ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက်အိမ်သုံးပရိဘောဂပစ္စည်းများနှင့် အ ဆောက်အဦးအလှအဆင်ပစ္စည်းများကို ဖြန့် ဖြုးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။လူကြီးမင်းတို့ ၏ အဆောက်အဦးများအတွက်လိုအပ်သောလှပပီးဒီဇိုင်းဆန်းသောAluminum Frame များကို လည်းရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။Aluminum Frame များကိုအဆောက်အဦးတွင်တပ်ဆင် ထားခြင်းဖြင့် အဝေးကကြည့်လိုက်လျှင် သေသပ်လှပပီး သစ်လွင်တောက်ပြောင်နေပါသည်။ ဒါကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အဆောက်အဦးများက်ို သေသပ်လှပပီးသစ်လွင်တောက်ပြောင်နေ စေဖို့ Royal Material ကုမ္ပဏီကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
18000 ~ 24000 Kyats
FEZZO Building Material Distribution မှ တင်သွင်းရောင်းချသော အိမ်ခန်း အလှဆင်ရာမှာ အသုံးပြုကြတဲ့ High Pressure Laminate များကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ အတွင်းနံရံတွေမှာသာမက wardrobe များ ၊ cabinet များ ၊ bookshelf များ ၊ door များ ၊ ကုတင် ၊ စားပွဲ ၊ ထိုင်ခုံ ၊ reception များ စသည်တို့အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အမြဲထာဝရ သစ်လွင်တောက်ပနေကာ နှစ်စဉ် အိမ်မွမ်းမံမှု စရိတ်သက်သာစေပြီး စိတ်ချမ်းသာမှု ၊ စိတ်ကြည်နူးမှုများ အမြဲဖြစ်ပေါ်ခံစားမိစေမယ့် ခေတ်မီ laminate design များစွာ ရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ အချိန်ကာလကြာမြင့်သည့်တိုင် အရောင်မှိန်သွားခြင်း ၊ အရောင်ပြောင်းလဲခြင်း ၊ ပျက်စီးသွားခြင်း လုံးဝမရှိသလို မျက်နှာပြင်တွင် ခြစ်ရာ ၊ စင်းရာများ အလွယ်တကူမဖြစ်ပေါ်ခြင်း ၊ ရေစိုဒဏ် ခံနိုင်ခြင်း ၊ ရေနွေးပူကဲ့သို့သောအပူဒဏ် ခံနိုင်ခြင်း ၊ ပိုးမွှားများ မကပ်ငြိနိုင်ခြင်း ၊ လူကို ဥပဒ်ဖြစ်စေတတ်သည့် ဓာတုဗေဒပစ္စည်းများ ကင်းစင်သောကြောင့် လေကောင်းလေသန့် ရရှိစေခြင်း ၊ 0.7 mm အထူရှိပြီး Design စုံလင်လှသဖြင့် ဝယ်ယူသူစိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ခြင်း စတဲ့ အချက်တွေကြောင့် လူကြိုက်များပြီး အသုံးများနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ရှင်.....။
Marble Items Gallery ကြမ်းခင်းအလှဆင် ကျောက်ပြားများ
Marble ကျောက်ပြားများသည် မြတ်နိုးဖွယ်ရာ အဆောက်အအုံအရင်းအမြစ်ပစ္စည်းများ ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ အဆောက်အအုံးအတွင်းအပြင် ဒီဇိုင်များဖြင့် ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ထိုကျောက်ပြားသည် ဆောက်လုပ်ရေး ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းအကြီးစားများ ၊ ဟိုတယ် ၊ နေအိမ်အဆောက်အဦး ၊ လေဆိပ်များတွင်လည်း အသုံးပြုပါသည်။ Granite ကျောက်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အဟန့်အတား ကျောက်တုံးတို့မှာ ကွန်ကရစ်နှင့် လုပ်ထားသော ကျောက်တုံးများထက် သာလွန်ပါသည်။ Marble ကျောက်ပြား တို့ကိုလည်း လှေခါးထိပ်များ ၊ ကောင်တာခုံများ ၊ ဧည့်ခန်းများ ၊ မီးဖိုချောင်တို့တွင်လည်း ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ Marble ကျောက်များသည် အရည်အသွေးမီသဖြင့် အချို့အဆောက်အအုံတို့ကို ဆောက်လုပ်ရာတွင် Marble တုံးများဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။
The Topcon DT-209 integrates the same high-quality advanced absolute circle reading technology found in Topcons high-performance total station products for more accurate field calculations. Topcon continues to deliver the highest quality optics and electronics you expect to find in Theodolites. The Topcon DT-209 weathers any wet or dust conditions in the field, allowing foramore productive day during inclement weather. Degree of protection against water is based on the standard IEC60529, whose definition is &quot;water projected in powerful jets against the enclosure from any direction shall have no harmful effects&quot;. All models are also compact and lightweight for easy portability; and their simple operation provides precise measurement inafunctional, hassle-free package. The Topcon DT-209 allows for more than 140h of continuous measurement in the angle mode. This long battery life will eliminate the necessity for the replacement batteries on the job. Like the DT-100 series, the DT-200 sereies weathers any wet or dust conditions in the field, allowing foramore productive day during inclement weather. All models are also compact and lightweight for easy portability; and their simple operation provides precise measurement inafunctional, hassle-free package.
2100 ~ 2900 Kyats
skirting &#039; T-bar &#039; installation အပြီးအစီးဈေး ဖြစ်ပါတယ်.. ခင်းရမဲ့ surface ညီညာခြောက်သွေ့ရပါမယ်..
Natural Surface Stone ကျောက်ပြားများကို ဆောက်လုပ်ရေးတွင်သုံးပါက မျက်နှာပြင်များအားလုံးကို အကြမ်း(သို့) အချောပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်ပါသည်။ ထိုကျောက်ပြားများသည် ရောင်စုံ၊မျိုးစုံရှိပြီး စိတ္တဗေဒအရ Marble ကျောက်ပြားများကို ကြည့်ရှုသူတို့အား ဘ၀င်ရွှင်မြူး စေပါသည်။ ထို Granite နှင့် Marble ကျောက်ပြားများကို သင်္ချိုင်းဂူတို့၌ ဆောက်လုပ်ရာတွင် မြန်မာပြည် နှင့် အချို့နိုင်ငံများ၌အသုံးပြုကြပါသည်။Natural Surface Stone ကျောက်ပြားများကို လှေခါးထိပ်များ ၊ ကောင်တာခုံများ ၊ ဧည့်ခန်းများ ၊ မီးဖိုချောင်တို့တွင်လည်း ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ Natural Surface Stone ကျောက်ပြားများကိုe ကျောက်များသည် အရည်အသွေးမီသဖြင့် အချို့အဆောက်အအုံတို့ကို ဆောက်လုပ်ရာတွင်Natural Surface Stone ကျောက်ပြားများကိုe တုံးများဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။